Serene & ezothando ngokubuka, enyakatho yechibi Naivasha
Naivasha, Wilaya ya Nakuru, i-Kenya
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Holly
Leli cottage elihle liyindawo yothando efanelekile, noma indawo yomlobi, yalabo abafuna ukuzola, ukuzola nemvelo, amahora angu-2 nje ukusuka eNairobi (amaminithi angu-30 ukusuka edolobheni laseNaivasha). Ibekwe endaweni emangalisayo ngezansi kwehlathi lase-Eburru, futhi isendaweni ephephile yendawo yokuhlala yaseGreenpark, indlu ibheke iLake Naivasha, Mount Longonot kanye ne-Aberdares. Ikotishi liyimizuzu emi-5 nje ukusuka eGreat Rift Valley Lodge linesitolo sasemapulazini, indawo yokuphuzela utshwala/indawo yokudlela, ichibi lokubhukuda, ithenisi, igalofu namabhayisikili okuqashwayo.
Indawo yokuhlala enhle enohlelo oluvulekile enekhishi, indawo yokudlela, indawo yomlilo yangaphakathi nezindawo ezithokomele zokufunda/zokubhala, namafasitela aseFrance avulekela ethaleni elihle nengadi encane.
Ibekwe kumahektare angu-5 omhlaba omuhle ovulekile, kukhona ukubukwa okuhle kweLake Naivasha kanye ne-Aberdares, kanye nendawo ebukekayo enwetshiwe yamapulangwe. (Qaphela: ikotishi alikho edolobheni laseNaivasha kodwa imizuzu engu-25 uma uhamba ngemoto ukusuka edolobheni elisenyakatho yechibi.
Izikhombisi-ndlela: Ezivakashini ezifikayo: Sicela ulandele ngomusa izikhombisi-ndlela nge-imeyili njengoba indawo ye-Airbnb ivaliwe kancane!). Bona iphinikhodi/imephu yami ukuze uthole indawo eqondile yekotishi!
(Iphephile) izindlela zokuhamba emhlabeni (amahektha ama-5) kanye naseduze nendlwana (ngaphakathi kweGreenpark).
I-BBQ kanye netafula lokudlela langaphandle
Indlu iza nomsizi wasendlini, uPamela. Ukupheka kuyatholakala ngokucela (uma kukhona!).
Ayikho i-WiFi kodwa indawo yokulala ine-WiFi imizuzu emi-5 ukusuka endlini.
Sicela ulethe amanzi okuphuza!
Imizwa yasendle nejabulisayo - Kulabo abathanda uhambo nokuqwala izintaba (okuhlanganisa ubusuku bonke uma uze netende!), ngicela ungazise futhi ngingahlela umhlahlandlela wendawo ukuze akuhlangabeze futhi akudlulisele ehlathini eliwumlingo lase-Eburru (kuphela nje 20). imizuzu ukusuka endlini)!
4.81(37 okushiwo abanye)
IGreenpark inenkundla yezindiza yangasese esebenzela izakhamizi zayo kanye neGreat Rift Valley Hotel neLodge.
Ikotishi liyimizuzu engu-20 nje yokushayela ukuya e-Eburru National Park enhle 'umcebo waseRift Valley' ukuze uqwale, ukhempe njll. Imininingwane yehlathi / unogada uma iceliwe!
Umphathi wehostela othandekayo nomnakekeli wendlu ubizwa ngokuthi uPamela., futhi uzohlangana nawe futhi anikeze okhiye njll (ikhiye elikhiye lomnyango lincane kancane ngakho-ke yiba nesineke!) futhi kuzoba indawo yokuxhumana eyinhloko yekotishi ngesikhathi sokuhlala kwakho. . IsiNgisi sakhe sihle kodwa ungase udinge isineke ngocingo. Uhlala nje imizuzu emi-5 ukusuka endlini!
QAPHELA: uma unemibuzo emikhulu, sicela ungangabazi ukungishayela ucingo ngokuqondile!
Umphathi wehostela othandekayo nomnakekeli wendlu ubizwa ngokuthi uPamela., futhi uzohlangana nawe futhi anikeze okhiye njll (ikhiye elikhiye lomnyango lincane kancane ngakho-ke yi…